स्वास्थ्य::Nepal's Online News Portal
हस्तमैथुनपछिको मेरो लिङ्ग किन दुख्छ?के यो यौन रोग हो?पढ्नुहोस्
असोज,२१/ म २५ वर्षीय अविवाहित पुरुष हुँ । मैले आजसम्म कसैसँग यौनसम्बन्ध राखेको छैन । आफ्नो यौनप्यास मेटाउन मैले १४ वर्षको उमेरदेखि नै लगातार हस्तमैथुन गर्दै आएको छु । हस्तमैथुनमा चिल्लोपनका लागि म आफ्नो...
लामो समय यौनसम्पर्क राख्न के गर्ने?यस्तो छ उपाए,पढ्नुहोस्
असोज,२१/ यौनसम्पर्कको समय कति ? यौन उत्तेजनामा आउने र विभिन्न चरणमा अघि बढ्दै जाने कुरा कतिपय बाह्य तथा आन्तरिक कुराहरूमा भर पर्छ । किन्सेले गरेको अध्ययनमा योनिमा लिङ्ग प्रवेश गराएको दुई मिनेटभित्रै ७५ प्रतिशत...
उदास हुनु हाम्रा लागि किन महत्वपूर्ण?
असोज,२१/ उदासी निकै महत्वपूर्ण इमोसन अर्थात भावना हो । जब कुनै व्यक्ति उदास हुन्छ, त्यसपछि दिवास्वप्न देख्न थाल्छ र मष्तिस्कमा विविध विचारहरु खेल्छन् वा लक्ष्यबिहीन विचारहरु आउँछन् । रचनात्मक यात्राका लागि यो निकै महत्वपूर्ण प्रक्रिया...
पुरुषको तुलनामा राति महिला बढी सेक्सी हुनुको खास कारण यस्तो पो रहेछ
मानिसहरु यौनको बारेमा धेरै कुराकानी गर्न रुचाउँदैनन् । तर सुखद जीवनको लागि यौन जीवन पनि सुखद हुनु जरुरी छ । यसको लागि यौनबारेमा एकअर्कामा खुलेर कुरा गर्ने वातावरण हुनुपर्दछ । जसरी जीवनमा खाना, निन्द्रा...
यौन ईच्छा दबाउदा हुनसक्छ यति ठुलो घटना, खुलेरै गर्नुहोस यौन सम्पर्क
यौन इच्छा दबाउँदा शारीरिक र मानसिक समस्या देखिन सक्छ । कुनै निश्चित सीमा भित्र रहेर सामाजिक मर्यादाको पाsexलना गर्दै यौन इच्छा बिभिन्न माध्यमबाट पूरा गर्नुपर्छ । पतिमा सम्भोग इच्छा जागेको छ र पत्नीमा जागेको छैन...
जति गरे पनि मेरो यौनिबाट पानि झर्दैन ? के गर्ने होला
म ३४ वर्षीया विवाहित महिला हुँ । मेरो सेतो पानी कत्ति पनि आउँदैन । यौन सम्पर्क गर्दा होस् वा अरू बेला । कृपया यो समस्याको समाधान बताइदिनुभए आभारी हुने थिएँ । योनिरस कसरी आउँछ रु...
अब कण्डम लगाएर गर्न पर्दैन -यस्तो प्रबिधीको विकाश–पुरा पढ्नुहोस
महिलाले प्रयोग गर्ने गर्भ निरोधक औषधीकोबारेमा त सुनिएको थियो । तर अव भने पुरुषले समेत अनैच्छिक गर्भ रोक्न कण्डोमको विकल्प खोज्न सक्ने भएका छन् । अव पुरुषले प्रयोग गर्न सक्ने गर्भ निरोधक गोली बजारमा...
ढुक्क हुनुहोस् कण्डम नलगाएर यौन सम्पर्क गर्दा योनी भित्रै विर्य झरे पनि गर्भ रहन्न, पढ्नुहोस
काठमाडौँ । संसारकै सबैभन्दा रोमान्सले भरीपूर्ण खेल भनिन्छ सेक्सलाई । तर सेक्सलाई जति सामान्य रुपमा बुझिन्छ यो त्यो भन्दा कैयौँ गुणा जटिल छ भन्ने कुरा बुझ्न मानिसलाई समय लाग्छ । ब्यबहारिक जिवनमा नपुगी अल्लारे...
एकदमै फिल दिन्छु, जती माग्छ तेती दिन्छु ,हेर्नुहोस् भिडियो
असोज,२०/एकदमै फिल दिन्छु, जती माग्छ तेती दिन्छु ,हेर्नुहोस् भिडियो ...
मुख मैथुनको भिडियो हेर्दा डर लाग्यो तर आफै गर्दा लागेन,हेर्नुहोस् भिडियो
असोज,२०/मुख मैथुनको भिडियो हेर्दा डर लाग्यो तर आफै गर्दा लागेन,हेर्नुहोस् भिडियो ...